Sweden iyo Warshadaha nukliyeerka | Somaliska
Ka dib dhulgariirkii ka dhacay Japan jimcadii la soo dhaafay iyo dhibaatada ka haysata xakameynta warshadaha nukliyeerka ee wadankaas ayaa dood kulul ka dhalatay wadamada Yurub ee isticmaala korontada nukliyeerka. Germalka ayaa bilaabay qiimeyn ay ku sameynayaan guud ahaan warshadahooda nukliyeerka. Sweden ayaa ka mid ah wadamaha aadka ugu xiran koronta nukliyeerka ayadoo 45% korontada Sweden ka timaado 3 warshadood oo ku kala yaala dalka daafihiisa. Laanta la socodka Nukliyeerka Sweden (Strålsäkerhetsmyndigheten) ayaa sheegtay ka dib dhibaatada ka taagan Japan inay ku soo bateen dadka soo wacaya iyo kuwa websitekooda soo booqanaya ee wax ka waydiinaya amaanka warshadaha Nukliyeerka Sweden. Urur lagu magacaabo Dhaqdhaqaaqa ka soo horjeeda Nukliyeerka (Folkkampanjen mot kärnkraft) ayaa sheegay in ay qorshaynayaan in ay sameeyaan mudaharaadyo lagaga soo horjeedo isticmaalka warshadaha Nukliyeerka Sweden. Sweden ayaa leh 5 warshood oo ku shaqeeya quwada Nukliyeerka, 2 ka mid ah warshadaas ayaan shaqeyn oo la joojiay. 3da shaqeysa ayaa ku kala yaala Forsmark, Ringhals iyo Oskarshamn. Raysal wasaaraha Sweden Fredrik Reinfeldt ayaa sheegay in uu filayo in wadahal muhiim laga yeesho amniga warshadaha nukliyeerka. Sidoo kale xisbiga Miljöpartiet ayaa dalbaday in baarlamaanka Sweden uu ka yeesho dood ku saabsan nukliyeerka. Shacabka Sweden ayaa codbixin laga qaaday sanadkii 1980 balse codbixintaas laguma joojin isticmaalka nukliyeerka. Qatar weyn ayaa ka dhalan karta haddii qarax ka dhaco mid ah mid ah warshadaha nukliyeerka ayadoo hada Japan dadka laga rarayo magaalooyin u jira warshadaha 30 km. Sanadkii 1986 ayaa wadanka Ukrain waxaa ka dhacay qarax warshad nukliyeer kaasoo sababay in ay ku sumoobaan dad badan, suntaas ayaa gaartay wadamo badan oo kumanaan kilomitir u jira Ukrain xitaa waxaa laga dareemay suntaas Sweden oo ka badan 1,000km u jirta goobta uu qaraxa ka dhacay.
Ka dib dhulgariirkii ka dhacay Japan jimcadii la soo dhaafay iyo dhibaatada ka haysata xakameynta warshadaha nukliyeerka ee wadankaas ayaa dood kulul ka dhalatay wadamada Yurub ee isticmaala korontada nukliyeerka. Germalka ayaa bilaabay qiimeyn ay ku sameynayaan guud ahaan warshadahooda nukliyeerka. Sweden ayaa ka mid ah wadamaha aadka ugu xiran koronta nukliyeerka ayadoo 45% korontada Sweden ka timaado 3 warshadood oo ku kala yaala dalka daafihiisa.
Laanta la socodka Nukliyeerka Sweden (Strålsäkerhetsmyndigheten) ayaa sheegtay ka dib dhibaatada ka taagan Japan inay ku soo bateen dadka soo wacaya iyo kuwa websitekooda soo booqanaya ee wax ka waydiinaya amaanka warshadaha Nukliyeerka Sweden.
Urur lagu magacaabo Dhaqdhaqaaqa ka soo horjeeda Nukliyeerka (Folkkampanjen mot kärnkraft) ayaa sheegay in ay qorshaynayaan in ay sameeyaan mudaharaadyo lagaga soo horjeedo isticmaalka warshadaha Nukliyeerka Sweden.
Sweden ayaa leh 5 warshood oo ku shaqeeya quwada Nukliyeerka, 2 ka mid ah warshadaas ayaan shaqeyn oo la joojiay. 3da shaqeysa ayaa ku kala yaala Forsmark, Ringhals iyo Oskarshamn.
Raysal wasaaraha Sweden Fredrik Reinfeldt ayaa sheegay in uu filayo in wadahal muhiim laga yeesho amniga warshadaha nukliyeerka. Sidoo kale xisbiga Miljöpartiet ayaa dalbaday in baarlamaanka Sweden uu ka yeesho dood ku saabsan nukliyeerka.
Shacabka Sweden ayaa codbixin laga qaaday sanadkii 1980 balse codbixintaas laguma joojin isticmaalka nukliyeerka. Qatar weyn ayaa ka dhalan karta haddii qarax ka dhaco mid ah mid ah warshadaha nukliyeerka ayadoo hada Japan dadka laga rarayo magaalooyin u jira warshadaha 30 km.
Sanadkii 1986 ayaa wadanka Ukrain waxaa ka dhacay qarax warshad nukliyeer kaasoo sababay in ay ku sumoobaan dad badan, suntaas ayaa gaartay wadamo badan oo kumanaan kilomitir u jira Ukrain xitaa waxaa laga dareemay suntaas Sweden oo ka badan 1,000km u jirta goobta uu qaraxa ka dhacay.
Rabshado ka dhacay Stockholm iyo cabsi laga qabo in ay dhacdo sida London
Asc jimcale salan kadib runti wa arin ay adunka o dhan ay isha kuhayan dhibatadii kalatay wardhad nugler o ku taalay japan ok sweden na iney kabaarandhagan wa arin meesha kujirta
Alahow ku qarxi nukliyerka dhulgarirkana ku rid iyaga swedish japan arinka dhacdy waxan kaga farxad badnana lahaa swdn inay ka dhacdo wayo waxay cadaysten islam nacayb iyo somali nacay marka somaliyey ti japan ka dhacdy inay sweden ka dhacdo ku ducaysta wayo ambil bay nafta naga qaden
Fikirkaas anigu kuguma raacsani waayo waa mid ku saleysan in dadka dhamaantood buraash laysku mariyo. dadku isku mid ma ahan, bulshada Sweden inteeda badan waa dad wanaagsan oo xushmad leh.
Haddii aad ku habaarto sababta ay sameeyeen koox yar oo cunsuriyiin ah, soo lama mid noqoneysid kuwaas maadaama aad dadka isku sanduuq ku riday oo aadan kala saarin kan wanaagsan iyo kan xun?